Tari-dalana Toriteny Alahady 26 Febroary 2017 (Alahady faha-7 mialoha ny PASKA) – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalan’ny texte izay ho toriana manerana ny Sahan’ny FLM amin’ny Alahady faha VII mialoha ny Paska ho avy izao (26/02/2017)
TEXTE: LIOKA 18:31-43
Alahady faha VII mialoha ny Paska isika izao ry havana. Tandrify izany indrindra ny texte izay anjarantsika eto. Raha hazavaina ao anatin’ireo textes izay manodidina azy ity texte ity dia izao no azo ambara:
– A. Ny Lioka 18:18–30 dia miresaka ny amin’ilay lehilahy mpanankarena izay nanontany an’i Jesosy momba izay hataony mba handovany ny fiainana mandrakizay.
Raha araka ny fampianarana (Jodaista/Farizaista) izany notanany dia efa azony antoka ny fandovany ny fiainana mandrakizay. Olona nahatandrina (ἐφυλαξάμην, vb φυλάσσω aorist middle, 1st pers. sing; eng. to watch, guard, protect) izany tamin’ny fahatanterahany sy ny fahafenoany izy araka ny fanambarany (manambara izany ny mari-potoana aorist eto). Araka ny fiheverany dia olona nankasitrahan’Andriamanitra noho izany izy: nanankarena izy. Porofon’ny maha efa azo antoka ny fiainana mandrakizay ho azy izany araka ny fiheverany. Olona nanana ny lazany sy ny mahaizy azy teo amin’ny fiarahamonina sy teo anatrehan’ Andriamanitra araka ny fiheverany izy. Kolotsaina tamin’izay fotoana izay anefa ny te-hoderaina imasom-bahoaka ary izany ihany no anton’ny fanontaniana izay napetrany tamin’i Jesosy: tiany hoderain’i Jesosy imasom-bahoaka noho izany izy. Tsy dera noho ny efa fananany ny fiainana anefa no azony teo imasom-bahoaka fa ny mifanohitra amin’izany kosa.
– A1. Ny Lioka 19:1–9 kosa dia miresaka momba an’i Zakaiosy. Lehilahy mpamory hetra (mpiara-miasa tamin’ny Romana) sady fohy kely (μικρὸς, and. 3) izy.
Na dia mpanankarena aza Zakaiosy dia olona maloto teo amin’ny fiarahamonina sy ny fiangonana Jiosy noho ny toe-batany (anormal ka maloto tahaka ny boka sy ny kilemaina rehetra) sy ny asany. Tsy mba nanana ny lazany na ara-piarahamonina indrindra ny ara-pivavahana teo amin’ny Jiosy izy. Kanefa ny fifanenany tamin’i Jesosy izy dia nanova ny mahaizy azy rehetra izany: Olona manana ny mahaizy azy ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra izy.
– B. Ny Lioka 18:31–34, ny tapany voalohany amin’izay anjarantsika, dia miresaka momba izay hiseho amin’i Jesosy any Jerosalema tsy ho ela.
Andriamanitra tokoa tonga Olona tokoa Izy. Manana ny lazany sy ny voninahiny ary ny mahaizy Azy manokana araka izany Izy. nalaim-baraka sy nonoina toy ny olon-dratsy indrindra teto amin’izao tontolo izao anefa Izy. Izany fahafatesany tao anatin’ny fahafaham-baraka tanteraka izany anefa no nahatanterahany ny fanavotana izao tontolo izao. Fa na dia nalain’izao tontolo izao baraka teo amin’ny hazofijaliana aza Izy dia notafian’i Ray voninahitra tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty kosa. Tahaka izany koa izay nampiraisina Aminy rehetra.
– B1. Ny Lioka 18:35–43 kosa dia miresaka momba an’i Bartolomeo jamba izay nangataka ny famindrapo tamin’i Jesosy izay nantsoiny hoe “Zanak’i Davida”.
Noho ny fahajambany dia noheverina ho olona maloto ara-pivavahana izy: noheverina fa nofaizin’ Andriamanitra manokana noho ny fahotany izy (ampit. Jao. 9:1ff.): marik’izany ny fahantrany. Nahilikiliky ny fiarahamonina noho izany izy. Ny fifanenany tamin’i Jesosy anefa dia nanova izany toerana misy azy izany. Tsy nahiratra ihany izy fa isan’izay nanaraka an’i Jesosy koa, i.e., manana ny fiainana mandrakizay.
Inona ny Lesona azontsika tsoahina avy amin’izany rehetra izany?
Tsy ho an’izay manamarinan-tena na manandratan-tena (ampit. ilay mpanankarena, 18:18–30) ny fiainana mandrakizay fa ho an’izay manetry tena amin’ny maha mpanota azy kosa (ampit. Zakaiosy, 19:1–9; ilay jamba, 18:35–43).
Ny fanalam-baraka an’Ilay Tompon’ny Voninahitra (18:31–34) sy ny fihaonan’izay tsy mba manana voninahitra noho ny maha mpanota azy Aminy amin’izany (ampit. Zakaiosy, 19:1–9; Ilay jamba, 18:35–43) no hananan’izy ireo ny voninahitra sy laza ao amin’ny fiainana mandrakizay na ny Fanjakan’Andriamanitra.
Ho an’Ilay nalaina baraka teo amin’ny hazofijaliana irery ihany anie ny Voninahitra. Amena!